dimanche, 09 août 2015 23:48
Haintrao : Efa-mianaka indray maty tao anaty trano hazo
Labozia no niavian’ny loza tao amina tokantranona mpivady mamo lava mipetraka tao Antohomadinika III G Hangar, Boriborintany I, Antananarivo renivohitra. Tombanan’ny manodidina ho mamo tsy nahatsiaro tena izy ireo tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza ka tsy nisy tafavoaka velona niaraka tamin’ny zanak’izy ireo roa. Mipetraka amina trano hazo rahateo izy ireo, ka mora nihanaka ny afo na dia niezaka namono ihany aza ny manodidina. May avokoa ny entan’izy ireo. Efa nanao fanentanana ny mponina mba tsy hanorina trano hazo ny Fokontany hisorohana ny haitrano nisesy teny an-toerana saingy tsy voahaja izany.
samedi, 08 août 2015 11:11
Ny sindikan'ny Mpanao Gazety Malagasy (SJM) dia manameloka tanteraka ny herisetra sy asa fampihorohoroana natao tamin'ny onjampeon'ny Viva Fianarantsoa izay miendrika famonoana mihitsy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Tsy misy na inona na inona manamarina ny habibiana atao mahakasika ny haino aman-jery tahaka izao, indrindra moa fa noho ny tsy fitovian-kevitra politika, koa mangataka ny SJM mba handray andraikitra haingana ny fitondram-panjakana hanokatra fanadihadiana momba ity raharaha fandrobàna ity ary hanasazy henjana ireo tompon'antoka sy ny mpibaiko. Natao androany, 08 aogositra 2015 Ny Filoha Rocco RASOANAIVO
jeudi, 06 août 2015 22:35
Soaniedanana - Ankazobe Tanàna vaovao mampiasa jiro avy amin'ny masoandro
Folo volana taorian'ny niforonan'n'ny tanànan'i Soaniedanana dia tonga ny jiro manazava, azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Notokanana omaly izy ity, izay vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny Electricité Sans Frontière sy ny Primatiora. Tanàna vaovao eny amin'ny 67km miala an'Antananarivo, manaraka ny lalam-pirenena faha-4 i Soaniedanana, ary teraka tao anatin'ny tetikasa "Exode Urbain" an'ny HAFARI Malagasy ho an'ireo olona volona hifindra monina hiala ny tanan-dehibe. Misy 4500 ny mponina eny ankehitriny.